Best 27 Tapa-totozy Tattoo Ideas ho an'ny vehivavy - Tattoos Art Ideas
sonitattoo Novambra 22, 2016
Ny vehivavy dia tia an'ity karazana tatoazy ity. Tati-tavy fanasan-tenda ity izay mahatonga ny fahasamihafana rehetra. Misy karazan'ireny tatoazy ireny izay azonao ampiasaina mba hampiavaka ny fahasamihafana. Rehefa vonona ny hanao tatoazy mahatsikaiky tatoazy toy ny vehivavy ianao, dia tokony ho azonao antoka fa manana tatoazy tsara ho anao ianao izay mety hahatonga ny fangoronana ho anao tanteraka.
1. Tombo-kavina ho an'ny vehivavy
2. Tattoos mavesatra ny antsasaky ny taova
Ity tolo-tena #half #sleeve ity ho an'ny vehivavy dia lasa malaza. Ny fomba fiasan'ny tatoazy dia ny fikarakarana azy no mahatonga azy io manokana ho an'ny vehivavy maro.
3. Tattoos mateza lehibe
Misy toerana sasantsasany ahafahanao manana #tattoo ary ny maso rehetra dia ho eo aminao. Tattoo tape-tanana ho an'ny vehivavy dia sangisangy ny antony mahatonga anao ho azo antoka fa manana izany ianao.
4. Tattoos manja manja manokana
Ny famaritana ny karazana tatoazy fananganana antsasak'izay ilainao dia zavatra tokony ho azonao atao. Rehefa manao izany ianao, dia mora kokoa aminao ny manana tattoo manokana fanasan-tanana manokana izay mety hahatonga ny olona hijery anao rehefa ahodanao izany.
5. Tattoos tsara tarehy marefo
Ny lehibe kokoa dia ny habetsaky ny loko ao amin'ny famolavolanao tombo-tavy tattoo, ny lehibe kokoa ny fiampangana. Mila mahatakatra izany ianao alohan'ny ahafahanao mandray anjara amin'io karazana tatoazy io. Vehivavy maro no tia an'ity tatoazy ity.
6. Tattoos marefo
Raha te hividy tatoazy ianao mba hanamboatra tatoazy amin'ny antsipirihany amin'ny tatoazy, manandrama ary ataovy ny #design aloha na mijanona miaraka amin'ny tatoazy raha tsy afaka miaraka miaraka amin'ny tattoo tsara tarehy ho anao ianao.
7. Lovely tapa-tavy
Rehefa mahazo famolavolana voamarina ho an'ny tatoazy ianao, dia tsara ny manamarina ny tanjona mety aminao. Tattoos tapa-tavy matevina dia nanjary nahafinaritra tokoa rehefa voasokitra teo amin'ny vatany izy ireo.
8. Tattoos marefo marefo
Azonao atao ny mieritreritra ny manova ny faritra misy tapa-damba tapa-damina efa voafaritra raha toa ka tsy azonao antoka ny fomba fijerin'ny tatoazy anao. Voalohany, jereo ity sary ity ary azafady fa ny anao dia tsara toy izany.
9. Word Tattoo Tattoo
Ny fahazoana tatoazy dia zavatra izay mety ho tian'ny vehivavy maro. Raha tsy nahita tatoazy fanasan-damba tiana toy ity ianao, angamba, fotoana izao hanandrana ity tetika ity eo amin'ny akanjonao.
10. Fitiavana tapa-tavy
Raha toa ka tsy nahazo tatoazy toy ny ramatoa mihitsy ianao, fotoana izao hahazoana tatoazy fanasan-tombo-kase izay hanampy anao hanova ny fahasamihafana amin'ny maha-mpanambady amam-panahy anao.
Amin'ny toe-javatra izay eritreretinao momba ny fampiasana tatoazy ho an'ny paiso, dia tokony hijery ireo poti-doko marobe an-tserasera ianao ary manao ny safidinao.
12. Lolo vavy matevina amin'ny tatoazy
Rehefa mieritreritra ny hahazo tatoazy matory ianao dia manana safidy maro azo alaina. Ny fampisehoana ny tatoazy anao dia ny manampy anao hahazo ny endriny tonga lafatra izay mety ho tianao foana.
13. Sarivongana tapa-tavy
Raha toa ianao ka mila portrette amin'ny rantsan-tananao, ny fahazoana sarimihetsika mivalona amin'ny tatoazy dia mety ho inona no hanome anao ny design #idea izay ilainao.
14. Mofomamy tapa-tavo-tavo lava
15. Selfie miaraka amin'ny tavy lava fanala
Raha zazavavy tsara ianao, dia nahazo ny tattoo tsara tarehy tonga lafatra izay tianao ho tianao. Ny tatoazy fanasan-damba tsara tarehy tsara dia zavatra izay hanampy anao hanao izany fanatrehana tonga lafatra izany izay ilainao.
16. Tattoo-mahery matevina
Eny tokoa, na dia ireo olona tsy tia tatoazy aza dia mety ho tia ny tati-pahefana matanjaka be. Izany no mahatonga antsika hahita tatoazy maro isan-karazany manerantany amin'ny tatoazy an-tasy.
17. Rose et Owl Tola Idea Tattoo Idea
18. Special Tattoo Special Tape
Ny zavatra tena tokony hoeritreretinao, raha toa ianao ka mahazo ny tatoatanao voalohany amin'ny maha-vehivavy anao dia mahazo tataom-paty manokana amin'ny tatoazy miaraka amin'ny fanampian'ny tatoazy tsara.
19. Tattoo antsasak'adiny
Ho an'ny olona sasany, ny orita dia ny tiany indrindra ary rehefa mahazo tatoazy lava-pandriana izy ireo amin'ny vatany.
20. Cool Owl Tattoo tato ho an'ny Tattoo
21. Tattoo tavoahangy mofomamy
Jereo ity tatoazy ity ary jereo ny fomba mahafinaritra azy. Rehefa tena olona mankasitraka ny fiainana ianao, dia ity tattoo ity dia ho anao.
22. Tapa-tavoahangy halatra hoditra
23. Tsara tarehy artwork amin'ny tavy lava antsasaka
Olona vitsivitsy no mahatsiaro tatoazy raha namoy olona iray izay nanana dikany manokana teo amin'ny fiainany izy ireo. Ny olon-kafa dia afaka manentana tattoos hahatsiaro fotoana manokana eo amin'ny fiainany.
24. Flowers Tattoo Design Tattoo
Angamba ianao tsy te-handrakotra ny tatoavinao amin'ny antsasa-tapisaka raha voaravaka voninkazo. Maro ireo vehivavy no tia an'ity tatoazy ity izay antony mety hikatso anao ao amin'ny vatanao.
25. Elefanta Tovolahy Tapa Idea Tattoo
26. Tapa-kevitra ny tapa-tavoahangy lava
27. Tovolahy mofomamy matevina ho an'ny vehivavy
Tags:tattoos sleeve tatoazy ho an'ny zazavavy
tatoazy voninkazoeagle tattooscat tattoostattoo cherry blossomtattoo octopusrip tattoostattoos ho an'ny lehilahydiamondra tattookoi fish tattootattoos voronaelefanta tatoazytatoazy ho an'ny zazavavyanjely tattoosmehndi designtattoo infinitytatoazy fokotattoosTattoo Featherloto voninkazoAnkle TattoostattoosTatoazy ara-jeometrikatattoos crossfitiavana tatoazytattoo ideastattoos rahavavytattoos armtratra tatoazymoon tattoostattoo watercolorNy zodiaka dia mampiseho tatoazytanana tatoazymozika tatoazylion tattoostattoos footscorpion tattootatoazy loloraozy tatoazynamana tattoos tsara indrindratattoos mpivadymasoandro tatoazytattoos mahafatifatytattoos backtattoo eyetato ho an'ny vatofantsikaHeart Tattoosarrow tattootattoos sleevehenna tattoocompass tattoo